Mpamatsy tsara indrindra sinoa vy sosona vy tranom-borona akoho amam-borona trano famolavolana trano amidy any Kenya
1. Trano akoho amam-borona Vanhe Modular House Co., Ltd dia mpanamboatra matihanina amin'ny firafitra vy any Shina. Famolavolana, famatsiana ary fametahana tranobe vita amin'ny vy (atrikasa fananganana vy, tranobe fanatobiana vy, hangar rafitra vy), miaraka amin'ny fanamarinana ISO9001, SGS sy CE, traikefa 20 + taona, firenena 90+ naondrana: Etiopia, Tanzania, Nizeria, Afrika Atsimo, Algeria, Dubai, Saudi Arabia, Thailand, Australia, France, Germany sns erak'izao tontolo izao. Ny firafitry ny customi ...
Fivarotana mafana lehibe metaly maoderina fanoherana orana vy firafitra akoho an-trano akoho amam-borona trano fiompiana omby
1.VANHE Poultry House Vanhe Modular House Co., Ltd dia mpanamboatra matihanina amin'ny firafitra vy any Shina. Famolavolana, famatsiana ary fametahana tranobe vita amin'ny vy (atrikasa fananganana vy, tranobe fanatobiana vy, hangar rafitra vy), miaraka amin'ny fanamarinana ISO9001, SGS sy CE, traikefa 20 + taona, firenena 90+ naondrana: Etiopia, Tanzania, Nizeria, Afrika Atsimo, Algeria, Dubai, Saudi Arabia, Thailand, Australia, France, Germany sns erak'izao tontolo izao. Raha mbola azonao atao ...
trano firafitra vita amin'ny vy lafo vidy efa vita amin'ny trano firaketana osy
1.VANHE Poultry House Vanhe Modular House Co., Ltd dia mpanamboatra matihanina amin'ny firafitra vy any Shina. Famolavolana, famatsiana ary fametahana tranobe vita amin'ny vy (atrikasa fananganana vy, tranobe fanatobiana vy, hangar rafitra vy), miaraka amin'ny fanamarinana ISO9001, SGS sy CE, traikefa 20 + taona, firenena 90+ naondrana: Etiopia, Tanzania, Nizeria, Afrika Atsimo, Algeria, Dubai, Saudi Arabia, Thailand, Australia, France, Germany sns erak'izao tontolo izao. 1). Amin'ny ankapobeny ...